HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Waaxaha Booliska Ordu waxay soo kormeereen Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha
03 / 12 / 2019 Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
kooxaha taraafikada ee zabita ayaa soo kormeeray gaadiidka dadweynaha
Qeybta Ciidanka Boliiska ee Qeybta Booliska Magaalada ee Qeybta taraafikada iyo Nabadsugida iyo Agaasinka Gaadiidka Dadweynaha ayagoo wata gawaarida S-plate-ka iyo gawaarida xamuulka dadweynaha ayaa waxaa kormeeray kooxaha.
XARUNTA ADEEGYADA 19 EE XILXAADADA 1279 WAA LAGU SAMEEYEY
Kooxaha taraafikada booliiska iyo waaxda gaadiidka dadweynaha ee ardayda iyo gaadiidka degmada ee gawaadinka loo yaqaan '19 S plate 1279' ayaa la kormeeray. Hantidhawrka kadib, waxaa warbixin la siiyay gawaarida aan buuxin shuruudaha.
150 VEHICLE EEG AH
Gawaarida dadweynaha ee 150 ayaa la kormeeray intii ay socdey kormeerka degmada Altınordu Qaabsocodka sharciga waxaa lagu bilaabay adoo haynta diiwaangelinta gaariga 51, kaas oo aan soo dejineynin-dagin, oo aan lahayn rukhsad shaqo iyo dukumiinti oggolaansho waddo.
XAALADAHA DHAQAALAHA EE DHAQANKA
Isagoo sheegaya in kormeerrada la sameeyo xilliyo kala duwan, mas'uuliyiinta waaxda taraafikada waxay baarayaan dharka darawalada iyo dharka iyo sidoo kale kormeerka waraaqaha sida laysanka darawalnimada, laysanka, SRC, shahaadada gaadiidka xayeysiinta. Intaa waxaa u dheer, kooxda ayaa maamusha alaabada iyo waxyaabaha lagu daro sida gaaska gawaarida, muraayadda gadaal u fiiriso iyo filimka dariishadaha; Waxay kale oo ay ula dhaqmaan gawaarida sida nadiifinta baabuurta, joogsi la’aan iyo sidashada rakaab xad dhaaf ah.
AUDITS WAA IN AY WADA JIRAAN
Muwaadiniinta ku dhaqan gobolka oo dhan si ay maskaxda ugu hayaan kormeer maalin iyo habeen ah oo sheegaya in kooxaha bilayska, ayaa sheegay in kontaroolada gaadiidka dadweynaha ay sii socon doonaan.
Kormeerka Awoodda laga soo qaaday Booliska Gaadiidka ee Bursa
200 Milyan oo Rakaab ah ayaa la raray Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli
Tareenka Kocaeli wuxuu qaadayaa tallaabooyin khadka shaqada ah
IMM, ciddii u dhaxaysa Hasan Kaya iyo shuftada Metrobüs burbur (Video)
Booliska degmada ayaa caqabad ku ah bini'aadanimada burcad badeedda
E5, E6 iyo Adeegyada Gawaarida Gaadiidka by IMM Bilayska
Gaadiidka dadweynaha Ordu
Qeybaha Booliska ee Ordu
Gawaarida leh taarikada S